Blockchain Izindaba 08.05.2018 - Blockchain Izindaba
New York Stock Exchange kungase ukuqalisa Bitcoin platform Ukuhweba
Le nkampani umzali kwe-New York Stock Exchange ubelokhu esebenza esikhungweni sokumba yokuhweba online ayezosenza zimali esikhulu ukuthenga bese ubamba Bitcoin, ngokuvumelana ama-imeyli namadokhumente asibheke-New York Times kanye abantu abane waziswa ku umzamo owabuza ukuhlala bengaziwa ngoba izinhlelo zazisekhona oluyimfihlo.
Oracle ukuqalisa blockchain-njengoba-a-service platform kule nyanga
Software giant Oracle is konke sekulungile ukuqalisa esidlangalaleni blockchain-njengoba-a-service platform yayo kule nyanga. Frank Xiong, iqembu likamongameli Oracle sika Blockchain nesevisi ye-Cloud, wathi ekwembulweni kwetshe ukuthi ngokuqinile ihlose ukuheha kokubili izinkampani ezinkulu nezincane, nge zamanani esekelwe kuthengiselana ivolumu.
Moscow imithetho enkantolo cryptocurrency likhona ucabanga izindlu
Inkantolo eMoscow isibuse kwa ukufaka cryptocurrency wallets njengengxenye izindlu a ucabanga okweletayo sika, siqaphela okhiye wesikhwama futhi izimali njengoba impahla. Iphuzu liwukuthi ukuhlonza umnikazi wesikhwama mfihlo okhiye kwaba khona noma cha. Inkantolo yanquma ukuhlonza kungenzeka nokuthi okhiye kumele ububusi njengengxenye izindlu okweletayo sika.
Bloomberg oluqalisa c ...
Thumela Previous:12 amabhange Chinese esetshenziswa blockchain e 2017
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 09.05.2018
May 21, 2018 ngesikhathi 2:15 AM
May 26, 2018 ngesikhathi 5:30 PM
May 28, 2018 ngesikhathi 1:39 AM
Juni 10, 2018 ngesikhathi 11:49 PM
Juni 12, 2018 ngesikhathi 7:32 AM